Padman – Page 2 – Filimside.net
Rasmi: filimka Padman iyo todobaadkiisa labaad ganasiga uu gudaha Hindiya ka sameeyay
Superstar Akshay Kumar filimkiisa Padman ayaa 78% hoos u dhac sameeyay todobaadkiisa labaad wuxuuna keenay 13.50 Crore (Trade Figure). Padman mudo labo todobaad wadarta guud wuxuu keenay 75.50 Crore (Trade Figure) waxayna u egtahay 80 Crore ilaa 85 […]
Sonam Kapoor waxay qeyb katahay ama wax ka jishay filmka Padman kaaso tiyaatarada saaran waxayna filmkaan ku leedahay door caawiye ah halka Akshay Kumar iyo Radhika Apte hogaamiye ka yihiin. Sonam ayaa saxaafada la falgashay […]
Shalay iyo ganacsiga ay sameeyeen filimada: Aiyaary, Black Panther, Pad Man & Padmaavat
February 21, 2018 Zakarie Abdi
Filimka Aiyaary ayaa ganacsigiisa hoos u socdo maalin walbo wuxuuna keenay Talaadadiisa kowaad 1.20 Crore taasi oo ka dhigan 15% – 20% hoos u dhac inuu sameeyay marka lala bar bar dhigo Isniintii ganacsigiisa. Aiyaary mudo shan […]
Rasmi: filimka Padman iyo Isniintiisa labaad ganacsiga uu gudaha Hindiya ka sameeyay
February 20, 2018 Zakarie Abdi
Superstar Akshay Kumar filimkiisa Padman ayaa ganacsi dhex dhexaad ah sameeyay Isniintiisa labaad wuxuuna keenay 1.50 Crore (Trade Figure). Padman wuxuu ku ganacsi noqday maalintii shalay ahayd Aiyaary oo masraxa ku cusub balse sidoo kale waxay […]
Rasmi: filimka Padman iyo mudo 10-maalmood ganacsiga uu gudaha Hindiya ka sameeyay
February 19, 2018 Zakarie Abdi
Superstar Akshay Kumar filimkiisa ayaa ganacsi wacan sameeyay labadii maalmood ee ugu dambeesay sabti iyo axad wuxuuna keenay 8 Crore todobaadkiisa labaad sedexda maalmood ee ugu horeyso ganacsigiisa guudna mudo 10-maalmood haatan wuxuu marayaa 71 Crore (Trade Figure). […]
Rasmi: filimka Padman iyo sabtigiisa labaad ganacsiga uu sameeyay
February 18, 2018 Zakarie Abdi
Superstar Akshay Kumar filimkiisa Padman ayaa sare u kac 50% sameeyay sabtigiisa labaad marka lala bar bar dhigo jimcadiisa labaad ganacsiga uu sameeyay waana sare u kac aad u wanaagsan. Padman sabtigiisa labaad wuxuu keenay 3 […]
Rasmi: filimka Padman iyo Jimcadiisa labaad ganacsiga uu gudaha Hindiya ka sameeyay
February 17, 2018 Zakarie Abdi
Superstar Akshay Kumar filimkiisa Padman ayaa keenay 2 Crore maalintiisa 8-aad ama Jimcadiisa labaad taasi oo ka dhigan wadarta guud inuu haatan maraayo 64 Crore (Trade Figure). Sida muuqato Padman cimri ahaantiisa wuxuu ku istaagi doonaa 80 Crore sida ay […]
Superstar Akshay Kumar, Radhika Apte iyo Sonam Kapoor filimkooda Padman ayaa sameeyay todobaadkiisa kowaad ganacsi la aqbali karo asigoo keenay 62 Crore (Trade Figure) sida shabakada Boxoffice India soo daabacday. Padman si wacan ayuu isku celiyay afartiisa […]
Rasmi: Padman iyo arbacadiisa kowaad ganacsiga uu sameeyay maalinta jaceylka ayuu ka faa’iideestay
February 15, 2018 Zakarie Abdi
Superstar Akshay Kumar filimkiisa Padman ayaa shalay ka faa’iideestay maalintii jaceylka aduunka madaama fasaxyo Hindiya ka jireen dhalintana filimkaan usoo daawasho tageen. Sidaa darteed Padman ayaa keenay 7 Crore (Trade Figure) arbacadiisa kowaad taasi oo ka dhigtay […]
Rasmi: filimka Padman iyo Talaadadiisa kowaad ganacsiga uu sameeyay
Filimka Padman ayaa shalay (Talaado) ka faa’iideestay fasixii feestada Mahashivratri ee gobolada qaar Hindiya ka jiray wuxuuna keenay 6 Crore (Trade Figure) maalintiisa shanaad. Wadarta guud filimka Padman haatan mudo shan maalmood ah wuxuu soo xareeyay 51 Crore (Trade […]